ပ၇ဟိတကို စိတ်ဝင်စားကြသူများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပ၇ဟိတကို စိတ်ဝင်စားကြသူများ
Posted by mandalarthu on Jan 30, 2012 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary |5comments
အခုတလော ဟိုနေ၇ာမှာလည်း “ပ၇ဟိတ” ၊ ဒီနေ၇ာမှာလည်း “ပ၇ဟိတ”နဲ့ကျွန်မတို့ မန္တလေးမြို့ မှာသာမက မြန်မာနိုင်ငံ နေ၇ာအနှံ့ အပြားမှာ တော်တော်လေး ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် လုပ်ကိုင်လာကြတာ တွေ့ မြင်နေ၇ပါတယ်။
ကိုယ့် လူမျိုး၊ကိုယ့် ဘာသာဝင် အချင်းချင်း မွန်မြတ်သောစိတ်ထားဖြင့် ရိုင်းပင်းကူညီမှုတွေက
မြင်၇၊ကြား၇တာနဲ့ ပင် အား၇ကျေနပ်စ၇ာပင်။
ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသော မိသားစုများမှ ပေါက်ဖွားလာသော ကလေးငယ်များကို ပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်အောင် မိမိတတ်စွမ်းနိုင်သလောက် လစဉ်ငွေကြေး နှင့် စာအုပ်စာတန်းများ ကူညီထောက်ပံ့ မှုပေးနေသော ပ၇ဟိတ အသင်းအဖွဲ့ များနှင့် 
ထို အသင်းအဖွဲ့ များတွင် မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ပြီး ကလေးငယ်များကို အချိန်ပိုင်းစာသင်ကြားပေးခြင်းနှင့် မိမိကဆ၇ာဝန်ဖြစ်ပါက မိမိတတ်နိုင် သလောက် မိမိ ဧ။် အားလပ်ချိန်ကလေးများကို ဖဲ့ ကာေ၇ာဂါဝေဒနာကို ခံစားနေ၇ရှာသော ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ သက်ကြီးရွယ်အိုများအား အခမဲ့ ဆေးဝါးကုသမှု ပေးခြင်းတို့ က
ပ၇ဟိတ စစ်စစ် အလုပ်များပင်။
လူဆိုသည်မှာ မွေးဖွားလာကတည်းက မိမိ အကျိုးကိုသာအများဆုံး ကြည့် တတ်ကြ ၍ သူတပါးအကျိုးကို
ထည့် တွက်တတ်သူက ခပ်ရှားရှားပင်။
မိမိဧ။်အချိန် ၊မိမိဧ။်ငွေ၊မိမိဧ။် လုပ်အားကို စိုက်ထုတ်၍
အများအကျိုးအတွက် တပင်တပန်းလုပ်ဆောင်ပေးနေသူတို့ က တော့ 
ထိုသူများဧ။် ခံယူချက်၊ ထိုသူများဧ။် စိတ်ထားကတော့ အတော်လေး အတုယူဖွယ်ကောင်းပါသည်။
သူတို့ ဧ။်လုပ်ဆောင်ကူညီပေးမှုကြောင့် အခြားသူတို့ ထံမှ ငွေကြေး၊ကျေးဇူးတ၇ားတုံ့ ပြန်မှု နှင့် အခြားမည်သည့် တစုံတ၇ာကိုမျှ့ ပြန်လည်၇ယူဖု့ိထိုသူတို့့မမျှော်လင့်ကြပါ။
မွန်မြတ်လှသော လေးစားအတုယူဖွယ် စိတ်ဓာတ်ပင်။
ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာ သူတို့ ဧ။်ဘ၀ကို သူတပါးအတွက် သူတို့ တတ်စွမ်းသေ၇ွ့ သူတို့ ဧ။်
ငွေကြေး (သို့ ) လုပ်အားဖြင့် ကူညီ၇င်း
မိမိကိုယ်ကျိုး၊မိမိမိသားစု ကောင်းစားဖို့ သာတခုတည်းသာ ကြည့် ၍ နေ့ေ၇ာညပါ
ပင်ပန်းကြီးစွာလောဘတကြီး လုပ်ကိုင်ရှာဖွေနေကြသူများအဖို့ တွေးကြည့် တတ်လျှင်
ပ၇ဟိတလုပ်၇ာ၌လည်း အချိန်ပြည့် လုပ်ဆောင်နေ၇မည် မဟုတ်ပါပေ။
မိမိ အကျိုးစီးပွားကိုလည်းထိုက်သင့် သလို လုပ်ဆောင်နေ၇ဦးမှာပင်။
မိမိအကျိုး သူတပါးအကျိုးနှစ် ဖက်မျှကာ လုပ်ဆောင်တတ်မှသာ
အတ္တနှင့်ပ၇ မျှမျှတတ ဖြင့် ဟန်ချက်ညီညီ ဖြင့် 
လောက အကျိုး ဆထက်တပိုး သယ်ပိုးနိုင်မည့်
လူပီသ သည့် လူသားစင်စစ် အဖြစ် ဘ၀ကို အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ တည်ဆောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါလော။
မွန်မြတ်သော ပ၇ဟိတ အလုပ်များကို လူသားတိုင်း တတ်စွမ်းသမျှလုပ်ဆောင်သွားမည် ဆိုလျှင်ဖြင့် 
အေးချမ်းသော လောကလူ့ ဘောင်ကို တည်ဆောက်နိုင်ပြီး
လူတိုင်း သည် ဘ၀မှာ မြင့် မားသော ဘ၀ပိုင်ရှင်များဖြစ်နိုင်ကြမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းမွန်တဲ့ အတွေးပါဘဲ သမီးရေ။
အရီးက အသက်ကြီးသူတွေကို စောင့်ရှောက် တဲ့ ပရဟိတ ဝင် အတော်ဖြစ်ချင်တယ်။
သမီး လေးအတွက် ကျေးဇူးဘဲ နော်။ :-)
လောက အကျိုး ဆထက်တပိုး သယ်ပိုးနိုင်မည့် ………………..
ကြိုးစားနေတုံးမှာ အခုလို စာများဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ပိုမိုကြိုးစားချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာမိပါတော့တယ် ….
(မိန်းမပျိုလေးများ လမ်းမှားမရောက်စေရန် ကိုယ်ဖိရင်ဖိ စောင်မကြည့်ရှုပါ့မယ် .. ဤကား သူကြီးအလိုတည်း) …
ကပေါက်ဖော်၊ ကပေ၊ ကိုရင်စည်၊ 77၊ ကိုထွန်းဝင်းလတ်၊ ဖရဲ၊ မှော်ဆရာနဲ့ ဂီဂီကလည်း
(ယောင်္ကျားပျိုလေးများ လမ်းမှန်ရောက်ရန် … ဤကား မိုက်ကယ်၏အလိုတည်း)
ပရဟိတဆိုတာ လူတိုင်းမှာ ဒီလိုစိတ်လေးတွေ မွေးမြူသင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ်နိုင်တာလည်း အကျိုးခံစားရပါတယ်။ မနောလည်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ပေါ့။ ခုတောင် ရထားတဲ့စာမူခနဲ့ ဆည်းဆာရိပ်မှာ လှူဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ရှင်။
အရီးခင်လတ်ေ၇…..ကောင်းလိုက်တဲ့ စိတ်ကူးဘဲနော်။အသက်ကြီးတဲ့ သူတွေကိုစောင့် ရှောက်တဲ့ ပ၇ဟိတ အလုပ်ဆိုတာလူတိုင်းလုပ်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲမယ်ထင်ပါတယ်။အတော်လေးစိတ်ရှည်ပြီး ပြုစုတတ်မှသာဖြစ်တာမို့ အ၇ီးခင်လတ်ရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ စိတ်ကူးလေး တနေ့ အကောင်အထည်ပေါ်လာပါစေလို့့………ကျေးဇူးပါနော် ..အ၇ီးေ၇။
ကိုKingေ၇….ပ၇ဟိတ အလုပ်တွေကို လုပ်ခွင့် ၇ပါစေနော်။….အားပေးပါတယ်။
ကိုTrue Answerေ၇…. ကျေးဇူးပါနော်။
မနောေ၇………မနောပြောတာအမှန်ပါဘဲ….တပိုင်တနိုင် လုပ်၇င်းနဲ့ စိတ်တူတဲ့ လူတွေစုပြီး တဖြည်းဖြည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဖြစ်သွားခဲ့ ၇င်တော့ လောကကို ပိုလို့ အလှဆင်နိုင်မှာပါနော်။
မနောလေးရဲ့ အလှူ တွက် သာဓုပါနော်။